Myalwar-Diary: September 2007
Posted by myalwaryone at 6:24 PM7comments:
ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့...... ကိုယ်ကချစ်ရသူ.... ဘာကွာခြားသလဲ...???
အော်...အချစ်..အချစ်..... အချစ်ဆိုတာ.... တကယ်ပဲထူးဆန်းတယ်နော်.... လူတွေအချစ်မရှိရင်ရော...နေလို့မရနိုင်ဘူးလား....??? အသက်ရှင်လို့ မရကြတော့ဘူးလား.....မြလွှာတစ်ခါတစ်လေ..... စဉ်းစားမိတယ်.... အချစ်ဆိုတာ ဘ၀မှာ အရေးပါတဲ့နေရာတွေရှိသလို….အချစ်မရှိရင်လည်း မြလွှာတို့အသက်ရှင်နေနိုင်တာပဲလေ… ဟုတ်ဘူးလား…..အချစ်မှာမှ…မျိုးစုံပဲနော်….. တစ်ချို့ကလည်း ပြောကြတယ်… အချစ်ဆိုတာမီးတဲ့…. ဟုတ်တော့ ဟုတ်သလိုပဲ…… ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူ.... ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူ ဆိုတာက….ကိုယ်ချစ်ချစ်မချစ်ချစ်…ကိုယ့်အပေါ်ကို နားလည်မှုတွေ နဲ့ ချစ်နေတဲ့သူ……… အင်း… လူဆိုတာကလည်း ခက်သားလားနော်…ကိုယ့်ကို များများချစ်လေကြိုက်လေဆိုတဲ့ သူတွေက များတယ်…… ကိုယ်ကချစ်ရသူကတော့…အဲဒီဟာတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ…ကိုယ့်ဘက်က သူ့အပေါ်ကို နားလည်မှု အပြည့်အ၀ပေးထားတာ…. ကိုယ်ကသူ့အတွက် ထာဝရပေးဆပ်ချင်နေတာ….. အမြဲသူ့အတွက်ပဲ ကြည့်နေပေးတာ… အဲဒီဟာနှစ်ခုမှာ ဆိုရင်… ဘယ်တစ်ခုက ပိုလိုပင်ပန်းမယ် ထင်လဲ…???? မြလွှာကတော့…. ကိုယ်ကချစ်ရသူက ပိုပင်ပန်းတယ်လို့ထင်တယ်….. သူ့အတွက်နားလည်းပေးတာ..သု့အတွက် စိတ်ပူပန်ရတာ.. သူ့အတွက် ဂရုစိုက်ရတာ… သူ့အတွက် အချစ်တွေပေးရတာ… စုံလို့ပါပဲ… အရာရာကို သူ့အတွက်ချည်းဖြစ်နေမှ တော့ …. မြလွှာတို့ပင်ပန်းတော့မှာပေါ့နော်…… များများချစ်လေ…များများစိတ်ပင်ပန်းလေပါပဲ…. များများစိတ်ပင်ပန်းမှာစိုးလို့… နည်းနည်းလေးပဲချစ်လို့ကလည်း… မရပြန်ဘူးလေ….. ..အော်… အချစ်ကိုး…… မြလွှာကတော့…အချစ်ဆိုတာကို ဘ၀အတွက်လို့နားလည်ထားတယ်… တစ်ချို့ကလည်း သစ်ရွက်လှုပ်တာကို ရင်ခုန်တတ်တဲ့ သူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်…. မြလွှာတို့လို အသက်အရွယ်ကတော့…အချစ်ဆိုတာကို ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု..အဖြစ်ပဲ လက်ခံထားတယ်… လောကကြီးမှာက လူတစ်ယောက်အတွက်… ချစ်သူက အင်မတန်ပေါပါတယ်…. ဘ၀အတွက် တစ်ကယ်လိုအပ်တဲ့…. ဘ၀လက်တွဲဖော်… ဘ၀အတွက်အဖော်မွန်ကောင်း..ကပဲ ရှားတာပါ…. NGIIK သီချင်းထဲက လိုပဲလေ… အဲဒီသီချင်းလေးဆိုရင်.. မြလွှာ သိပ်ကြိုက်တာရှင့်….
" တို့အချစ်များပေးဆပ်ခွင့်ရှိရင်…. မင်းလေးအနားမှာပဲ…
Posted by myalwaryone at 3:05 PM5comments:
မြလွှာရဲ့ သူငယ်ချင်းလေးတွေဖြစ်တဲ့… TZM နဲ့….ကိုအဉ္ဖလီတို့က မြလွှာကို ဆောင်းရာသီနဲ့ပတ်သက်ပြီး Tag ထားကြတယ်တဲ့လေ…. ဆောင်းရာသီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး…. အမှတ်တရလေးတွေပြောပြပေးပါတယ်တဲ့လေ…. မြလွှာလည်း World Blog Day ပွဲလေးက ရှိနေတော့….. အချိန်ကမအားဘူးဖြစ်နေတယ်…. မဖြေသေးဘူးလားဆိုပြီးတော့ လည်း… မြလွှာရဲ့အိမ်လေးမှာ လာလာအော်ကြတယ်… အဲဒါနဲ့…. မြလွှာလည်းဖြေရတော့မှာ ပေါ့နော်…. ဆောင်းရာသီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး… မြလွှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့….. မြလွှာ ဆောင်းရာသီ ကို အရမ်းချစ်တယ်ရှင့်…ရာသီဥတုတွေထဲမှာ မြလွှာဆောင်းရာသီကို အကြိုက်ဆုံးပဲလေ… ဘာလို့မြလွှာ ဆောင်းရာသီကိုမှ ချစ်ရသလဲဆိုတော့…. နွေရာသီဆိုရင်… အရမ်းပူတယ်… မန္တလေးမြို့ကလည်း အပူပိုင်းဒေသဖြစ်လို့…. တခြားဒေသတွေထက် ပိုလို့တောင်ပူတယ်… မိုးရာသီဆိုရင်လည်း ….. မိုးတွေကရွာ… ရွံ့တွေ ဗွက်တွေနဲ့ဆိုတော့…..မြလွှာမိုးရာသီကိုလည်း မချစ်ဘူး…. ဆောင်းရာသီကတော့…. အဲဒီလို မဟုတ်ဘူးလေ…. ဘယ်အချိန်..ဘယ်နေရာကိုပဲသွားသွား…. အေးအေးချမ်းချမ်းလေးလေ…. နေလို့လည်းအရမ်းကောင်းတယ်…. ပြီးတော့…. မြလွှာကဆောင်းရာသီမှာ မွေးတာလေ… မြလွှာဆောင်းရာသီမှာမှ…အအေးဆုံးလတွေထဲမှာမှ… ဇန်န၀ါရီလမှာ မြလွှာလူ့လောကကြီးကို စတင်ဝင်ရောက်တာပေါ့… မြလွှာငယ်ငယ်က အရမ်းဆိုးတယ်ရှင့်… မြလွှာရဲ့မေမေနဲ့ ဖေဖေ ကို အရမ်းနှိပ်စက်တယ်လို့… မြလွှာမေမေက ပြောဖူးတယ်… အအေးဆုံးလမှာလည်း မွေးသေးတယ်… မြလွှာ တရေးနိုးလို့…. မေမေက နို့ဘူးဖျော်တိုတ်ရင်…. ပူရင်မသောက်ဖူးတဲ့ ရှင့်… အဲဒါနဲ့ မြလွှာရဲ့ဖေဖေနဲ့ မေမေက နို့ဘူးကို ရေစိမ်ကြတာပေါ့…. အဲဒီတော့ မြလွှာက ပြန်အိပ်သွားပြန်ပြီတဲ့လေ… နို့ဘူးလည်းအေးနေရော….တခါပြန်နိုးပြီး ငိုပြန်ပါရောတဲ့…. အဲဒါနဲ့ နို့ဘူးပြန်ဖျော်….ရေစိမ်… ပြန်အိပ်သွား…အဲဒါတွေနဲ့ပဲ… ဖေဖေနဲ့ မေမေကိုအိပ်ရေးပျက်အောင် မြလွှာလုပ်ခဲ့တယ်လို့ မြလွှာမေမေက ပြောတာပဲ…… အဲဒါလေးကတော့.. မြလွှာ လူ့လောက ကြီးကို စရောက်ရောက်ချင်း…ဆောင်းရာသီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့….. အမှတ်တရလေးတစ်ခုပါပဲ… ပြီးတော့… မြလွှာမှာ ဆောင်းရာသီဆိုရင်.. မြလွှာဖြစ်လာတတ်တဲ့ အကျင့်တစ်ခုရှိတယ်ရှင့်… Crazy လို့ ပြောရမှာပေါ့နော်… ဆောင်းရာသီရောက်ခါနီးပြီ ဆိုတာနဲ့…မြလွှာ ပြင်ဦးလွင်ကို သွားချင်နေတယ်…. ပြင်ဦးလွင်မှာက ဆွယ်တာလှလှလေးတွေရှိတယ်လေ….…. မြလွှာ ဆောင်းရာသီမှာ ၀တ်ဖို့ ဆွယ်တာလှလှလေးတွေ သွားဝယ်တာလေ…. မြလွှာဆောင်းရာသီမှာ တခြားအနွေးထည်တွေထက်ကို မြလွှာ ဆွယ်တာလေးတွေကို ၀တ်တတ်တယ်…. ပြီးတော့… မြလွှာချစ်တဲ့သူနဲ့…ဆွယ်တာ အင်္ကျီဆင်တူလေး ၀တ်ချင်တယ်လို့… မြလွှာ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ ဘူးတယ်….. အဲဒါကတော့ မြလွှာဆောင်ရာသီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး….မြလွှာရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုတစ်ခုပေါ့နော်… ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ရှင့်.. မြလွှာအတွက် အမှတ်ရစရာလေးတွေကလေ….. မြလွှာဘ၀အတွက် အရေးပါတဲ့ သူ၊ မြလွှာဘ၀အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သူ၊ ပြီးတော့ မြလွှာကို အမြဲတမ်းဆုံးမ သွန်သင်နေတဲ့သူ…..သူနဲ့လည်း မြလွှာ ဆောင်းရာသီမှာပဲ စဆုံခဲ့တာလေ…. ဆောင်းရာသီကတော့…မြလွှာအတွက် အမှတ်ရစရာတွေပေးခဲ့တဲ့ ရာသီလေးပါပဲ….. သူငယ်ချင်းလေးတွေရေ… မြလွှာဖြေပေးလိုက်ပြီနော်…..
Posted by myalwaryone at 7:25 PM No comments:
အဲဒီနေ့က August 31st လေ... ကမ္ဘာ့ Blog Day ပေါ့... မြလွှာတို့ ရွှေမန်းလေးမြို့ကြီးမှာတော့ World Blog Day အခမ်းအနားကို အဲဒီနေ့က ကျင်းပကြတယ်.. Blogger တွေတော်တော်များများ တက်ရောက်ကြတယ်… Blog ဆိုတာကို စိတ်ဝင်တစား တက်ရောက်တဲ့ သူတွေလည်း တော်တော်များတယ်… ပျော်စရာအစီအစဉ်တွေလည်းပါတော့ ပိုလို့တောင်မှ တက်ရောက်သူများပါတယ်… လူတွေကများ ၊ အလုပ်တွေက ရှုပ်ဆိုတော့ မြလွှာ Post တွေတင်ချင်ပေမယ့် မအားဘူးဖြစ်နေတယ်… မြလွှာဒီနေ့မှ ပဲတင်နိုင်တော့တယ်.. အဲဒီနေ့က မြလွှာ လည်းအရမ်းကြည်နူးမိတယ်…. တခြား မြလွှာတို့လို Blogger မောင်နှမတွေလည်း… မြလွှာကြည်နူးရသလုို… ပီတိဖြစ်ရသလို… ခံစားရမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်မိပါတယ်… ဒါလေးတွေကတော့ အဲဒီနေ့က အမှတ်တရပုံလေးတွေပေါ့နော်…..
Posted by myalwaryone at 5:58 PM 1 comment: